वडाध्यक्षको बारीमा अनुदानको विरुवा - Purbeli News
वडाध्यक्षको बारीमा अनुदानको विरुवा
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १७, २०७७ समय: १२:०२:४६
पथरी / एक गैर सरकारी संस्थाले अनुदानमा नगरलाई दिएको विरुवा वडाध्यक्षले आफ्नो बारीमा रोपेका छन् । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाकालाई युएनएचसीआरले दिएको १ सय ५० कागती, लिच्ची र आँपका विरुवा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष डम्बर चेम्जोङले आफ्नै बारीमा रोपेका हुन् । नगरले प्रत्येक वडामा १ सय ५० वटा विरुवा कृषकलाई वितरण गर्नु भनेर पठाएको थियो । तर वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष चेम्जोङले कृषकलाई भनेर ल्याएको विरुवा विहिबार विहान ७ बजे आएर आफ्नौ बारीमा रोपेको सधियार बताउछिन् ।
अनुदानमा आएको विरुवा जो कृषक हुन उनिहरुले नपाउने र एक जनप्रतिनीधिले १० ओटाका दरले विरुवा लगे पछि कृषकले के पाउने ? स्थानीय टिका गौतमले प्रश्न गरे । वडाध्यक्ष डम्बर चेम्जोङले कृषकलाई नदिई अनुदानमा आएको विरुवा आफ्नो बारीमा रोपोको स्थानीय र सधिया बताउछन् । यता वडाले विरुवा लिन आउनेलाई सकियो भनेर नदिएता पनि वडाले केहि विरुवा लुकाएर राखेको भेटिएको छ । वडाध्यक्ष चेम्जोङ भने विरुवा आफुले नलगेको र वडावासीले आफुलाई झुटो आरोप लगाएको बताएका छन । नगरबाट आएको विरुवा वडावासीलाई वितरण गरेको उनले जानकारी दिए ।
तर वडाले कृषीको कुनै पनि कार्यक्रममा सहि कृषकको पहिचान नगरेको राजेश धिमालले बताए । विरुवा माग्न आउनेलाई वडा कार्यलय र स्वास्थ भवन बनाउने ठाउँ रोप्ने भनेर भने पनि वडाध्यक्षले आफ्नै बारिमा रोपेको र वडामा लुकाएर राखेको दिपेश अधिकारीले बताए । वडाले विरुवा वितरणमा मनोमानी गरि वडाध्यक्षको बारिमा रोपेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन । विरुवा नपाएका शिव रिजालको प्रश्न छ “यदि वडाले विरुवा वितरण गरेको लिखित, तथ्याङक र मापदण्ड भए देखाउन सक्नुपर्यो नी ?